Palestina: Fihetsiketsehana ho amin’ny firaisam-pirenena · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Marsa 2011 4:30 GMT
Niantso fihetsiketsehana ao Gaza sy Cisjordanie ireo tanora tsy miankina ao Palestina ny 15 martsa 2011, mba hampiseho ny fankatoavany an'i Palestina fa tsy i Hamas sy Fatah. Nokarakaraina tamin'ny alalan'ny Facebook izany, an-jatony ireo nanao fihetsiketsehana teo amin'ny kianjan'ny al-Katibah ao an-tanànan'i Gaza.
Nandefa sary mitohitohy koa i Omar Ghraeib :
Ni-tweet i Omar:
Ni tweet mitovy koa i Laila Abu Dahi:
@LailaDahi: #video ny herim-pamoretana Hamas nanafika mpianatra vehivavy tao Al-Azhar uni. raha niezaka namonjy azy ireo ny lehilahy http://bit.ly/dY5eOB #Mar15
@AmoonaE nandefa ity horonan-tsary ity tamin'ny 16 Martsa, nampiseho ny mpianatry Al-Azhar voavelin'ireo mpanafika mitam-piadiana miaraka amin'ny kibay:
@Palestinevoiced: maherin'ny 2,000 ireo mpanao fihetsiketsehana tao amin'ny kianjan'i Manara tao Ramallah amin'izao fotoana izao. #Palestine #mar15
Nitohy ny 16 martsa ny fihetsiketsehana ary mbola nitohy izany tamin'ny 8 ora alina araka ny @Palestinevoiced:
Fihetsiketsehana ny alin'ny 16 Martsa hita fa nilamina:
Ni-tweet mivantana ao Gaza ny @NalanSarraj, @Omar_Gaza, @LailaDahi, sy @nazek88. Ni-tweet tao Ramallah @Palestinevoiced sy @Palestine15Mar, nandika ny tweet sy ny vaovao avy amin'ireo Twweps hafa manerana an'i Palestina @AmoonaE .